Mashruuca Biyo Galinta Degaanka Isgoys oo xariga laga jaray – Radio Muqdisho
Mashruuca Biyo Galinta Degaanka Isgoys oo xariga laga jaray
Xildhibaan Cabdulkaadir Carabow Ibraahim oo ka tirsan golaha Shacabka Soomaaliya ayaa xariga ka jaray Mashruuca dayactirka ceel biyoodka iyo Biyo Galinta Degaanka Isgoys oo uu ka hirgaliyey tuuladda isgoys ee degmadda Balcad , halka uu dadka deegaanka gaarsiiyey deeq ka kooban agabka laga galo roobka iyo dhaxanta maadama lagu jiro xili robaad.
Dayactirka Ceel biyoodka degaanka Isgoys ayaa waxaa ka faa’iidaystay in ka badan 500 oo qoys oo guryahooda loogu galiyey biyaha si lacag la’aan ah , kuwaa oo baahi badan u qabay in ay helaan biyo Wanaagsan , iyagoo ka doonan jiray meelo aad uga fog degaanka isgoys.
Xildhibaan Cabdulqaadir Carabow ayaa waxa ku wehliyey munasabadda xariga looga Jarayey Ceel biyoodka Isgoys Wasiir ku xigeenka Wasaaradda gargaarka , Xildhibaan Maxamed Axmed Abtidoon.
Dadka degaanka ayaa Xildhibaan Carabow uga mahadceliyey dayactirka ceel biyoodka iyo sida ay uga go’an tahay wax u qabashadda iyo garab istaagga Dadkiisa
Shaqooyin ka banaan wasaaradda Difaaca dalka.
Hantidhowraha Qaranka oo ka qeyblaya shirka INCOSAI2019 ee ka dhacaya Dalka Ruushka